Okwu Foundation • Banyere anyị - Ndị na-ebipụta echiche na nbibi
Okwu a bu Inc. Foundation, Inc bu ulo oru na-enweghi ego haziri na steeti New York na Mee 22, 1950. Nke a bu nani otu nzukọ di na Maazị Percival guzobere ma nye ya ikike maka ebumnuche ndị a. Ejikọtaghị ntọala ahụ ma ọ bụ jikọrọ ya na nzukọ ọ bụla, ma ọ bụghị na-akwado ma ọ bụ na-akwado onye ọ bụla, onye ndu, onye ndụmọdụ, onye nkuzi ma ọ bụ otu na-azọrọ na e sitere n'ike mmụọ nsọ, họpụta ma ọ bụ nwee ikike ịkọwa na ịkọwa ihe odide nke Percival.
Dabere na iwu anyị, ntọala nwere ike ịnwe ọnụọgụgụ ndị otu na - enweghị nsọtụ họrọ iji nye ya nkwado ha ma rite uru na ọrụ ya. Site na ọkwa ndị a, a họpụtara ndị nlekọta nwere ikike pụrụ iche na mpaghara aka ọrụ, ndị na-ahọpụtakwa ndị isi oche ndị na-ahụ maka njikwa na njikwa nke ụlọ ọrụ ahụ. Ndị nlekọta na ndị isi bi na mpaghara dị iche iche na United States na mba ndị ọzọ. Anyị na-esonye ọnụ maka nzukọ kwa afọ na nkwukọrịta na-aga n'ihu n'ime afọ iji mezuo ebumnuche anyị-iji mee ka ihe odide nke Percival dịrị na iji nyere ụmụ akwụkwọ ibe anyị aka kpọtụrụ anyị site n'ọtụtụ akụkụ ụwa iji lebara ọmụmụ ihe ha anya na ihe ịma aka ọtụtụ mmadụ na-eche ihu n'ọchịchọ ha ịghọta ịdị adị nke ụwa a. Maka ọchịchọ a maka Eziokwu, Echiche na Mbibi a na-akọwaghị ya na njedebe, omimi na ụba.
Yabụ, nraranye anyị na ọrụ nlekọta anyị bụ ime ka ndị ụwa mara ihe akwụkwọ a pụtara na ihe ọ pụtara Echiche na Mbibi tinyekwara akwụkwọ ndị ọzọ nke Harold W. Percival dere. Kemgbe afọ 1950, Okwu Foundation ebipụtala ma kesaa akwụkwọ Percival ma nyere ndị na-agụ ya aka ịghọta na ihe odide Percival. Mgbasa anyị ahụ na-enye ndị nọ n’ụlọ mkpọrọ na ọba akwụkwọ akwụkwọ. Anyị na-enyekwa akwụkwọ akwụghị ụgwọ mgbe a ga-ekenye ha ndị ọzọ. Site na mmemme Mmụta na Mmụta anyị, anyị na-enyere aka ịkwado ụzọ maka ndị otu anyị ga-achọ ịmụ ọrụ Percival ọnụ.
Ndị ọrụ afọ ofufo dị mkpa na nzukọ anyị dịka ha na-enyere anyị aka ịgbasa akwụkwọ Percival ka ọ bụrụ ndị na-agụ akwụkwọ. Anyị nwere ọganihu na ọtụtụ ndị enyi anyị enyerela anyị aka kemgbe ọtụtụ afọ. Onyinye ha gụnyere agụnye akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ, na-eziga broshuọ anyị nye ndị enyi, na-ahazi otu ọmụmụ ihe onwe ha, na ọrụ ndị yiri ya. Anyị na-enwetakwa onyinye ego nke dị oké mkpa iji nyere anyị aka ịnọgide n'ọrụ anyị. Anyị na-anabata ma nwee ekele maka enyemaka a!
Ka anyị na-agbasi mbọ ike ịkọrọ ndị mmadụ na anyị nwere ike ịkọrọ ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ anyị, anyị ji obi ụtọ na-akpọ ndị anyị na-agụ akwụkwọ ka ha soro anyị.
"Ozi anyị" bụ akụkọ mbụ nke Harold W. Percival dere maka magazin ya a ma ama, Okwu. O kere ederede dị mkpirikpi dị ka ibe mbụ maka akwụkwọ akụkọ ahụ. Nke elu is mmegharị nke mkpụmkpụ a mbipụta si mpịakọta nke mbụ nke olu dị iri abụọ na ise, 1904 - 1917. A ga-agụ nchịkọta akụkọ n'ozuzu ya na anyị Editorial peeji nke.